Ubuthakathaka obuthakathaka ungenye yezinkinga ezivame ukwesaba kakhulu. Kulokhu, into yokuqala okudingeka uyenze ukulala nokunikeza ukuphumula okuphelele. Ekuseni sula ngamanzi usawoti 1/2 litre lamanzi for 1 ithisipuni kasawoti. Bayosiza ekunciphiseni isimo samaconsi angu-15 we-infusions yezimbali namaqabunga e-sunflower, adle kathathu ngosuku. Yini esiyidingayo izixazululo zomuntu ngezifo zesifo, sifunda kulesi sihloko.
Uma le-palpitation ye-nervous isiqalile, isiguli sizobeka ukucindezela okubandayo enhliziyweni futhi kuhlinzeke ukuphumula isiguli. Ukugeza okufudumele kulungile, kodwa ngaphakathi sithatha amaconsi angu-15 we-valerian tincture.
Uma ebusuku enhliziyweni yokulangazelela, sebenzisa ikhambi labantu. Sigeza igumbi lokulala emanzini anosawoti, siwufake kahle, sibeke bese usigoqa kahle. Sizolinda ukuthi ihembe lime, lisuse, sula umzimba wome ithawula, shintsha izingubo bese ulala. Lesi sidakamizwa sisetshenziswa isikhathi esingaphezu kwe-1 ezinsukwini ezingu-14.
Ngomkhaza wesifo wobuso, sibeka amaqabunga e-geranium ezindaweni ezibuhlungu. Sizowavala ngendwangu yelineni futhi siwubophe ngesikebhe esishisayo. Amahlamvu ashintsha izikhathi eziningana.
Izixazululo zezifo zesifo
Ngokuvamile ubunqunu bokukhathazeka buvela emsebenzini ebusuku. Kuhambisana nobuthakathaka obuningi, ikhanda, izinhlungu ngemuva nangemuva ephansi, ukuqothulwa, ukulala, ukungalali ukudla. Ngakusasa sisula ngamanzi usawoti, thatha isigamu samitha amanzi, ufake isipuni sikasawoti kuso.
Njengoba ubuhlungu bomunwe esiswini, gubha ikhanda le-bulb, engeza ingilazi yobisi obusayo nokuphuza. Thatha izingxenye ezilinganayo iqoqo lamaqabunga e-valerian, i-shamrock, i-mint, i-orange, sizogcwala ingilazi yamanzi abilayo futhi sizophuza lokhu ukumnika ngaphambi kokulala.
Labo abanesimiso sezinzwa ezivusa amadlingozi, badinga ukusebenza emoyeni omusha futhi nsuku zonke ukuthululela amanzi abandayo.
Ukungaboni kahle kubangela izizathu ezahlukene. Kusukela ekulaleni, njengomthetho, abantu abajabule kalula futhi banesimiso sezinzwa esingazinzile. Lapho ukuleleka kungenzi umsebenzi womqondo, kanye nomsebenzi osebenzayo, sidla ukudla okudliwayo futhi silala ekuseni.
Ngaphambi kokulala, thatha amanzi okushisa ezinyaweni zakho noma uthathe okugeza okufudumele. Sizosiza ngaphambi kokulala ukubhuka okuvamile, futhi emilenzeni embhedeni sibeka ipayipi lokushisa. Ngobusuku sizophuza ingilazi yobisi olushisayo, noma ingilazi yempande yangempela ye-valerian. Ukuze wenze lokhu, isipuni sesipuni se-valerian sigcwele ingilazi yamanzi abilayo futhi ake simi imizuzu engamashumi amabili, bese sihlupheka.
Ngaphambi kokulala, hamba uhhafu wehora emoyeni omusha.
Njengoba singalali, sisebenzisa i-hypnotic kusuka kumbewu ye-dill, ukupheka ku-port noma i-Cahors. Thatha imbewu engu-50 yedill bese ufaka isigamu sebheyi lewayini. Masithathe 50 amagremu ngaphambi kokulala.
Thatha isipuni soju bese uphuza ingilazi yamanzi, uthathe ihora ngaphambi kokulala.
I-tincture ye-calendula izimbali zikhuthaza ukunyamalala kwekhanda futhi iphakamise amandla okusebenza: Thatha 4 tbsp. izinkezo ze-calendula izimbali futhi zimelele engilazi ye-40% utshwala amasonto amabili. Sihlala endaweni emnyama, bese sikhathaza ngamagremu ama-50 amanzi abilisiwe, sidonsa amaconsi angu-30 we-tincture, sithatha ukudla okuyisithathu ngosuku ngehora lehora ngaphambi kokudla.
Lapho isimiso sezinzwa sesiphelile, sidla i-hazelnut, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, isitshalo se-porridge noma intsha, abilisiwe. Umthelela omuhle kakhulu unikeza ukumnika kwe-sage - kususa ukuthuthumela kwezandla, kuthuthukisa imetabolism, kuvumela umsebenzi wezocansi.
Ukuqinisa amakhono engqondo esiwafaka ekudleni kwansuku zonke: ikhukhamba, i-beetroot, i-apula, isipinashi. Futhi ama-cranberries, imbewu, uju, i-walnut, i-apricot.
Izinkumbulo ezindala zinomthelela omubi kubantu be-psyche. Siza umama, uthathe amagremu angu-15 obuntshani oqoshiwe bese uwuthululela 200 ml amanzi ashisayo abilisiwe bese ubambezela isigamu sehora, bese uhlunga. Sithatha isigamu sehora ngaphambi kokudla, izikhathi ezinhlanu ngosuku, nge isipuni.
Isimo esibi sizothuthukisa i-tincture ye-camomile izimbali. Sifaka izimbali ngezidakamizwa ezingama-40 ngesilinganiso esingu-1: 1 ngesonto, gcina ukumnika endaweni efudumele nelomnyama.
Uma uthola ukungaqiniseki futhi ukwesaba ngamakhono akho, sebenzisa itiye elenziwe oregano: ngoba lokhu sithatha amathisipuni amane ohlaza utshani, ufake ilitha lamanzi abilayo. Siphuza ingilazi eyodwa kane ngosuku.
Manje siyazi ukuthi iziphi izifo zabantu ezingasetshenziselwa izifo zesifo.
Ukusikinyeka kwamaHawaii uLomi Lomi: ubufakazi, isenzo, amasu
Ukupheka kwe-Tibet kwentsha nobuhle
Ukusetshenziswa kwamafutha yemifino
Kunomsila omnyama kuyasiza
Amathiphu ambalwa okulwa ngempumelelo ebusika ebusika
Umphumela ozuzisayo we-cryosauna emzimbeni
Izidalwa ezinezintambo ezimbi kakhulu
Isaladi nge-salmon kanye namasizi wembuzi
Ukudumisa indoda, ungamcasula
Umculi uJulia Savicheva
Ikhekhe nge-persimmon ne-cognac
Isaladi nge-saumoni ne-pomelo
Ubulili besilisa kanye nokwesaba kwabesifazane
Amakhekhe we-chocolate nge-sauce efudumele
Ukubhula okungokoqobo ekudlala amakhadi
Indlela yokukhetha amabhuzu asebusika?